सोलारीको पहिलो रोजाइमा पर्न छाडेपछि रियल छोड्ने तयारीमा मार्सेलो, युभेन्टस जालान ? – Medianp
सोलारीको पहिलो रोजाइमा पर्न छाडेपछि रियल छोड्ने तयारीमा मार्सेलो, युभेन्टस जालान ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, माघ २९, २०७५०७:५६0
काठमाडौंः ब्राजिलियन लेफ्ट ब्याक मार्सेलोको भविष्य रियल मड्रिडमा संकटमा परेको छ । उनी पछिल्लो समय लगातार प्रशिक्षक सान्टियागो सोलारीको पहिलो रोजाइमा पर्न सकेका छैनन् ।
मार्सेलोलाई एक साताअघि कोपा डेल रे फुटबलमा बार्सिलोनाविरुद्धको खेलमा सुरुआती टोलीमा राखिएको थियो । तर, पछिल्लोपटक ला लिगामा भएको मड्रिड डर्बीक्रममा भने उनलाई बेन्चमा राखियो । एट्लेटिको विरुद्धको खेलपछि स्पेनिस मिडियाले रियलमा मार्सेलोका भविष्यका बारेमा अनेकौं समचार सम्प्रेषण गरेका छन् र कतिपयले सोलारीले मार्सेलोलाई बेन्चमा राखेर युवा खेलाडीलाई बढी महत्त्व दिइनुलाई मार्सेलोको समभावित बिदाइसँग पनि जोडेर हेरिरहेका छन् । पहिलो रोजाइमा पर्न छोडेपछि उनले रियल छोड्ने हल्ला समेत चल्न थालेका छन् । केही समय अघि क्रिस्टियानो रोनाल्डोले मार्सेलोलाई युभेन्टसमा स्वागत गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
३० वर्षीय मार्सेलो यसअघिसम्म रियलको टोलीमा लेफ्ट ब्याक सम्हाल्ने सबैभन्दा भरपर्दा र प्रमुख हतियार थिए । तर, पछिल्लो समय उनको स्थान २२ वर्षीय युवा खेलाडी सर्जियो रेगुइलियोनले लिइरहेका छन् । सोलारी रियलको नेतृत्वमा आइकन उनले धेरैजसो खेलमा रेगुइलियोनलाई नै महत्त्व दिँदै आएका छन् ।
पछिल्लोपटक मड्रिड डर्बीमा एथ्लेटिको मड्रिडविरुद्धको खेलअघि पत्रकार सम्मेलनमा सोलारीलाई पत्रकारले मार्सेलोको अवस्थाबारे प्रश्न गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले मार्सेलो टोलीका लागि दोस्रो कप्तान रहेको बताउँदै उनी अझै पनि टोलीका लागि एक प्रमुख हिस्सा रहेको बताएका थिए ।
तर, अर्को दिन हुने एथ्लेटिकोविरुद्धको खेलमा मार्सेलो सोलारीको छनौटमा परेनन् । सिजनकै ठूलामध्येका एक खेलमा उनी सुरुआती टोलीमा नपरेपछि सोलारीको सो निर्णयले मार्सेलोलाई रियल छाड्न थप दबाब दिने कदमका रूपमा चर्चा गरिएको छ ।
यो सिजन ला लिगामा २३ खेल सकिँदा मार्सेलोले मात्रै १२ खेल खेलेका छन् । त्यसक्रममा उनले २ गोल गरेका छन् । कोपा डेल रे फुटबलमा उनले ४ खेल खेल्दै १ गोलका लागि असिस्ट गरेका छन् ।
युरोपियन च्याम्पियन्स लिगमा मार्सेलाले ४ खेल खेल्दै १ गोल गरेका छन् । समग्रमा मार्सेलोले यो सिजन सबैखाले प्रतियोगिता गरेर ३ गोल गरेर ३ गोल नै असिस्ट गरेका छन् । उनले कूल २३ खेल खेलेका छन् ।
यस्तो छ, च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरणमा खेलाइने बल
आठौँ राष्ट्रिय खेलकूदः बास्केटबलको स्वर्ण विभागीय टोलीलाई
नेयमार मैदान फर्किएको खेलमा एमबाप्पेको ह्याट्रिक, पिएसजीले जित्यो उपाधि
युभेन्टसले लगातार आठौं पटक जित्यो ‘सिरी ए’ को उपाधी, रोनाल्डोले बनाए किर्तिमान